Ngo-1534 kwi-Murray - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKarin
Kunxweme loMlambo i-Murray ecaleni kwamahlathi e-redgum, le ndlu yokulala ye-3 inika uxolo kunye nokuzola kunye nabo bonke ubumnandi bekhaya kunye ne-10 mins kuphela ukusuka kwilokishi yaseBarham NSW (malunga ne-10km).
Ukurhoxa okuzolileyo nokuzolileyo. I-cottage inazo zonke izibonelelo eziqhelekileyo ezifumaneka kwikhaya losapho. I-cottage iyinxalenye yepropathi yokuphila ebekwe kwiihektare ezingama-30 kwaye inokufikelela ngokuthe ngqo kumlambo kunye nehlathi elibomvu legum.
Ukuphila kweentaka kuninzi - kookaburras, finches, rosellas. Ihlathi likarhulumente lilungile kumnyango olandelayo lilungele ukuhlola ngeenyawo okanye ngebhayisekile. Okanye usenokuziva ngathi uhambo lwangokuhlwa ngakumlambo iMurray ngephenyane ngorhatya, ubukele iikhangaru zisela okanye ii-emus zithe saa...
Amaxesha okuzonwabisa asenokuquka ukubukela iintaka, ukuhamba endle, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela isikhephe kunye nokuloba.
Ipropathi ikwanekhaya lethu losapho kunye namahashe amathathu.Ilinen kunye neetawuli zinikezelwe.
IBarham yidolophu encinci yelizwe emi kuMlambo iMurray kwi-NSW. Inee-pubs ezimbini, iKlabhu ye-RSL, ikhefi kunye neendawo zokutyela. Iyaziwa ngomgangatho wayo wegalufa kunye nokusingqongileyo komlambo iMurray. Uphuculo lwakutsha nje lwemigxobhozo ngaphakathi kwesiqithi saseGunbower kunye namahlathi eKoonndrook Perricoota abonelela ngentabalala yezilwanyana zasendle kunye nembonakalo entle yamahlathi entlaka ebomvu.
Abanini baya kufumaneka ngeengcebiso ngexesha lokuhlala kwakho ukuba kuyimfuneko.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9978